शिक्षा मानव अधिकार, संविधानत नागरिकको मौलिक हक, कार्यन्वयन गर्नु सरकार एवम् राज्यको दायित्व । यी शैद्धान्तिक पक्षहरु । हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षा न त व्यक्तिको मानव अधिकार नत राज्यको दायित्व । ८ सेक्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रुपमा विश्वभरी मनाईन्छ । नेपालमा पनि यसलाई एउटा पर्वको रुपमा “हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्ष..
जनताको परिवर्तनको चाहना र निरन्तरका संघर्षपश्चात् जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत इतिहासमै ..
विद्यालयममा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरू विभिन्न सामाजिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आए..
नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाको टीम पहिलो पटक चितवनको भम्रणमा निस्कने योजना बन्यो । र, यात्रा..
सहयोग गर्नु मानवीय धर्म हो । तर आजभोलि सहयोग सामाजिक संञ्जालमा फोटो हाल्नकै लागि गरेको हो ..
संघीयता कार्यान्वयन जटिल विषय हो । हामीले यो मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तिनै तहको सरकार स्थापना समेत गरिसकेका छौं । तर, तुलनात्मक रूपमा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमा अलि बढी अलमल आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा अहिले अन्योल सिर्जना भएको छ । खासगरी प्रदेशले […]
दशैं नेपालीहरूको सबै भन्दा विशेष पर्व मानिन्छ । घटसथापना देखि दशमीसम्म १० दिन पूजापाठ, व्रत र उत्सवकासाथ मनाइने चाड भएको हुनाले यसलाई दशैं वा “विजया दशमी”का नामले पनि चिनिन्छ । दशैं घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म १५ दिनको हुने भएता पनि पहिलो ९ दिनलाई नवरात्रि र दसौँ दिनलाई दशमी वा दशैं भनिन्छ । माता दुर्गाले महिषासुर नामक [..
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिकहकमा राखी, आधारमूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनु हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै अपाङ्गतामा रहेकाहरुको लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था सहित सबैले मातृभाषामा पनि पढ्न पाउने हकको सम्मान गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा र..
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनहिंसाले हाम्रो समाजमा डरलाग्दो स्थिति पैदा गरेको छ । यहि कारणले सरकारले पोर्न साइटहरु नेपालबाटै हटाउने कुरा गरिरहदा विभिन्न बहसहरु भैरहेका छन । पोर्न साइटहरुले बलात्कारका घटना बढायो भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर के वास्तवमै यौनहिंसा अन्त्य गर्न पोर्न साइट बन्द गर्दा स..
अहिले देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यो एकताको प्रक्रियालाई वरिष्ठताका आधारमा, विगतदेखिको कामको अनुभवका आधारमा, पार्टीको पदीय जिम्मेवारीका व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा । त्यो भएन । केन्द्रमा हिजो ठूलो पार्टी एमाले, त्योभन्दा अलिक सानो पार्टी..
मानिससँगै एटिच्युड विदेश पुगेपछि……
केही समयअघि डा. बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकामा कालो झन्डा देखाइएको एउटा छोटो युट्युब भिडियो सोसियल मिडियामा देखियो । १६ सेप्टेम्बर २०१८ मा अपलोड गरिएको उक्त भिडियोमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई अमेरिकामा आयोजित कुनै समारोहमा भाग लिन जाँदै गर्दा केही नेपालीले कालो झन्डा देखाएको दृश्य थियो । कालो झन्डासँगै थोरै सङ्ख्यामा ..
सामुदायिक वन र स्थानीय सरकारसँगको सम्वन्ध
जनसहभागीतामूलक पद्धतीवाट सफल पहिचान पाएको अभियान सामुदायिक वन हो । नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैसकेका छन् । २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण भैसकेको छ । २९ लाख ७ हजार ८ सय ८१ घरधुरी सामुदायिक वनका सदस्य […]
केही दिन अघि एक रंगविहीन तस्वीरले शहर ततायो । प्रधानमन्त्रीसँग ठिंग उभिएका पुरुष सम्पादकहरूको रंगविहीन र विविधताविहीन तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यसले नेपालमा विचार निर्माणको आधिपत्य कसको छ, ठ्याक्कै भनिदियो । पत्रकारिता र राजनीतिको घाँटी जोडिएको हुन्छ । दुवैमा शक्ति र सोचको भारी असन्तुलन कस्तो छ, बताइरहनु पर्दैन । दृष..
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवस देशव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाईयो । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार २०७५ असोज ३ भित्रमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाका सबै कानुनहरु बनिसक्नु पर्ने थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हक सम्ब..
नेपालमा आयोजित बंगालको खाडीसम्बद्ध राष्ट्रहरूको संगठन बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको जति चर्चा भयो, त्यसभन्दा बढी चर्चा भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासको भइरहेको छ । शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सातै राष्ट्रका सैनिकहरूले भारतमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा स्वागत गर्ने’ घोषणा गर..
व्यवसायिक घरमा पार्किङ नबनाउने घरबेटीलाई कारबाही खोई ?
आइतवार बाबुको मुख हेर्ने दिन प्रमिला थापा बानेश्वरमा आफ्ना बाबुलाई केही उपहार किनिदिन पसल छिरिन । उनले चलाएर आएको स्कुटर पनि पसल अगाडि नै रोकिन । र भित्र पसलमा कुन कपडा आफ्ना बुबालाई सुहाउछ भन्दै छान्न थालिन । उनी किनमेल गरिसकेर स्कुटर खोज्न थालिन तर उनको स्कुटर वेपत्ता भईसकेको थियो । वरिपरिकालाई सोधखोज गर्न थालिन […]
तामाकोशीको ‘शेयर’ श्रोतका मालिक जनतालाई किन ३० कित्ता मात्र ?
पृष्ठभूमी प्रकृतिको बरदानको रुपमा पहिचान बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशी पूँजी, श्रम र सीपमा बनाउने परिकल्पना सहित निर्माण थालिएको छ । आयोजनाको बारेमा राष्ट्रव्यापी रुपमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ । यसले मुलुकलाई र आयोजना प्रभावित जनतालाई कती प्रतिफल दिन सक्छ । स्थानियहरुको बहस त्यहा..
केही दिन अघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पढ्दै थिएँ । एउटा समाचारमा टक्क आँखा अड्कियो । समाचारको शिर्षकले नै मलाई झसङ्ग पारिसकेको थियो । समाचार पढ्दै जाँदा मेरा हातखुट्टा चिसा भए । समाचारमा भनिएको थियो ‘नेपालमा हरेक दिन तीन महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् । अन्य दुई महिलामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ ।’ तथ्याङ्ककका अनुसार [&hell..
वीर अस्पतालः रोगको उपचार कि, अभियुक्तको याताना गृह ?
वीर अस्पताल–नेपालकै पुरानो अत्याधुनिक सु्बिधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल । मेचीदेखि कालीसम्मका दूरदराजका जनताको विश्वास जितेको अस्पताल, जहाँ अनुभवी र काबिल चिकित्सकरुबाट सेवा पाईने विश्वासका साथ बहिनी दुर्गाको उपचारको शिलशिलामा डेढ महिनाअघि मैले त्यहाँको चिकित्सा सेवालाई नजिकबाट नियाल्ने मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएँ । त्यस..
बलात्कारलगायत महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनहरु विगतका तुलनामा धेरै कडा बनेका छन् । तर मूल कुरा बलात्कार घटनाका अनुसन्धान प्रभावकारी छैन । बलात्कारका मुद्दाहरु सरकारवादी हुन्छन् । सरकारवादी मुद्दा भएकै कारण कतिपय मुद्दाको दायेरी नै कमजोर बनाइनेर बलात्कारका मुद्दामा गतिलो बहस पनि नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका थ..
गत जेठ ३ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै ऐतिहासिक महŒव राख्ने ढंगले निर्माण भएको नेकपाले एकीकरणका क्रममा नवगठित केन्द्रीय कमिटीबाट राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित भएको छ । पार्टीबाट पारित दस्तावेजमा पार्टीका तात्कालिक लक्ष..
कांग्रेसले सरकारमाथि ‘अधिनायकवाद’को आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेस बुद्धिजीवीहरू यसलाई साबित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । कतिपय गैरकांग्रेसीहरूलाई पनि सरकार अधिनायकवादी बनेको लागेको छ । उनीहरूले पनि यसको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेसले लगाएको अधिनायकवादको आरोप भने नयाँ होइन । कम्युनिस्टहरूलाई ऊ लोकतन्त्रवादी नै देख्तैन ।..
साउनको सिस्नो र ओइलाएका कार्यकर्ता
केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी संसदीय दलको वैठकमा बोलेका कुरा उदृत गर्दै एउटा ट्वीट गरे–काँग्रेस साउनको सिस्नो झैं फैलियो, हामी चाँही ओइलायौं ।’ ट्वीटको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो–सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पार्टी पंक्तिले खुलेर प्रचार गर्न सकेन र प्रतिपक..
यसकारण आवश्यक छ पुष्पलाल राष्ट्रिय संग्राहलय
पुष्पलाल आज हुनुभएको भए उहाँ कति खुशी हुनहुन्थ्यो होला भन्ने कुराको हामी अनुमान गर्न सक्दछौँं । उहाँले नै पार्टीको बिऊ रोप्नु भयो, त्यो पार्टी पछि गएर जसरी छिन्नभिन्न हुन पुगेको थियो, त्यसबाट उहाँ धेरै मर्माहत हुनुभएको थियो । तर आज फेरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मात्रै होइन, नयाँ उचाईमा पु¥याउने काममा हामीले सफलता हासिल गरेका छौ..
नेपाल पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले सबैभन्दा अगाडि छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । तर, नेपालमा पर्यटन विकास भने कछुवाको गतिमा छ । पर्यटनको सम्भावना र विकासबारे न त गहन छलफल भएको छ, न उचित प्रवद्र्धन नै । नेपालको पर्यटन विकासका लागि सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र आवश्यक वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीसमेत रह..
सत्ताको प्यास मेट्ने बैशाखी–आधिनायकबाद र अनसन
अहिले मिडियाहरुमा अधिनायकबाद र डा गोबिन्द केसीको अनसन नियमित सर्बाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । यी दुई प्रसंगमा सदनदेखि सडकसम्म सरकारको पक्ष÷विपक्षमा समर्थन, आलोचना र ब्यंग्य भइरहेको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने–आलोचना र ब्यंग्य फरक कुरा हुन् । आलोचना गलत कामको बिरोध हो । ब्यंग्य सहि वा गलत दुवै कामलाई ठट्यौलो पारामा गरिने [..
पर्यटन विकास ‘सिजन’ले होइन, ‘भिजन’ले गरौं
राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै देशलाई सम्पन्न बनाउन धेरै लामो समयदेखि यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्दै आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने गरिएको छ । वार्षिक वजेट पनि बृद्धि भइरहेकै छ । निजी क्षेत्र पनि पर्यटनमा लगानी वृद्धि गर्दै दायारा अझ पराकिलो ..
देश नायकको खोजीमा छ
समाज नम्रपन, भद्रपन भन्दा बढी आवेग, उत्तेजना आक्रोश र रोषमा प्रभावित बन्दैछ । क्रोध र प्रतिशोधमा रुपान्तरण हुदैछ । नम्रता र भद्रता कमजोरीको रूपमा अर्थ्याइन्छ , बुझिन्छ । निरन्तर स्खलित सामजिक प्रतिस्ठा , गुमेको इज्जतको शोध भर्ना लिने ठाँउ छैन भेटिन्न । हामी नेपाली , हाम्रो सोच, शैली र प्रवृति गज्जबको छ हामी सस्ता हल्ला [&helli..
नयाँ पुस्तालाई सम्पूर्ण रुपले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ: गुरुराज घिमिरे, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस
निरंकुश राजतन्त्रबिरुद्ध सडकमा गणतन्त्रको नारा घन्काउँदै कुनै बेला विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाई गरेका गुरुराज घिमिरे तत्कालीन नेविसंघका अध्यक्ष तथा कांग्रेसका चर्चित युवा नेता हुन् । गणतन्त्रको नारा लगाउँदा राजद्रोहको मुद्दा खेपेका उनै घिमिरेसहित गगन थापा, प्रदिप पौडेललगायत कांग्रेसका केही युवा नेताहरुले अहिले पार्टीभित्र नेतृत्व..
नेपालको दीगो समृद्धिको लागि एकिकृत वस्ती विकास योजना पहिलो आवश्यकता
मानव वस्ती व्यवस्थापन र आर्थिक सामाजिक विकास सम्बन्धी विचार, बुझाई, बहस, नीतिगत सुधार तथा शासन सेवा जस्ता विषयमा उत्तरआधुनिकतबाद ९पोस्टमोर्डयानिज्म० पछि विकसित मूल्य मान्यता पद्धतिले विकास र परिवर्तनको विश्व अभियानले स्थलीय विशेषता एवं क्षमताका आधारमा निर्माण गरिएका विकास योजनाले कार्यान्वयन तहमा सार्थकता पाउने वास्तविकतालाइ अघि..